Oke ifufe akpala mkpamkpa na Texas US - Igbo News | News in Igbo Language
Jul 29, 2020 - 11:35 Updated: Jan 26, 2021 - 11:36
Ajọ ikuku chị ọsọ ruru otu narị kilomita na iri anọ na ise (145km) akpaala mkpamkpa na Texas dị na US ụnyaahụ. Gọvanọ steeti ahụ bụ Greg Abbot sị na ya bụ oke ikuku nwereike imebi ihe na mba ruru iri atọ na abụọ (32) ma akpachaghị anya.
Ọ sị na coronavirus ga-eme ka ihe siwanye ike maka ịnyere ndị ihe ụwa na-atụ n’ọnụ aka.
Ọ kọwara na ya bụ oke ifufe kpoachapụrụ ala na Padre Isaland na-asụzị nke bụ akwụ na Corpus Christi nakwa Brownsville.
O kwukwara na ya bụ oke ifufe akpọrọ Hanna nke na-akpa ike a niile ka bụ nke obere ya maka na ọ bụ nke mbụ na ogogo anọ n’ihe e ji elele ya bụ Simpson Scale na Bekee.